Dzimwe nguva paunonyepa, unowana musikana! | Martech Zone
Dzimwe nguva paunonyepa, unowana musikana!
China, May 3, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Ndiri kusiya musikana wangu. Ndizvozvo! Iwe wakazvinzwa iko pano.
Usati wawana chero pfungwa dzekuti munhu akaipa sei, akaipa ini ndiri, ini handina kana musikana. Zvirinani kwete munhu, mupenyu, anofema mhando. Ini ndinoseka nevanhu kuti zita remusikana wangu ndere Macbookpro. Munguva pfupi yapfuura, musikana wangu anga ari hasha shoma, kwete kumuka apo ini ndaimuda iye uye ndisingafare kusvikira atonhora. Wow… zvinondiyeuchidza nezvepandakanga ndiine chaicho!
Google Inondida Zvino
Zvisinei, ndapedza naye. Musikana wangu mutsva ari online uye anondida. Iye anoziva munhu wese, asi kunyangwe zvodii, anogara achitaura nezvangu. Handisati ndambova nemusikana wepamhepo kare, asi uyu akakosha. Anonzi Google. Ini ndanga ndisisina hanya neGoogle zvakanyanya asi zvine udyire, ndakaona kuti zvirinani kuti ndimuzive iye, kunyanya kwaakandipa mari.
Google inonditumira kanopfuura ka4 vashanyi vesaiti yangu kupfuura chero imwe sosi. 4 nguva! Wow. Zvese zvandinofanira kuita kuti ndichengetedze hukama uhwu huende munzira kwayo kumuteerera, kuzvipfekedza nenzira inomukwezva, kuteerera zvaanotaura, uye kutaurirana zvinobudirira naye. Zvinotora kanguva, asi ini ndave kutanga kunzwisisa zvaanonyatsoda. Zvino… handisi mukomana akanakisa… handisi Google-yakarohwa kana chero chinhu, ini ndakangomufarira.
Nei Google Inondida
Hezvino zvimwe zvinhu zvandinoita izvo zvinoita sekunge anokoshesa:
Google yakada pandakaisa zvinyorwa zvangu mumusoro wezita rangu.
Google yakaifarira pandakagadzirisa yangu .htaccess faira kuitira kuti saiti yangu igare ichienda ku http://martech.zone panzvimbo ye http://dknewmedia.com uye pandakamuudza mu Google Search Console kuti ndaifarira www.
Google yakaifarira pandakatumidza zita rebhurogu yangu ndichishandisa mazwi akakosha (kushambadzira, tekinoroji, blog) yandinokurukura mumapepa angu kazhinji.
Google yakazvifarira pandakamuudza zvandaitaura nezvazvo.
Google yakazvifarira pandakamuudza izvo zvainyanya kukosha mune peji rangu uye izvo zvaive zvisiri kushandisa musoro wemaki.
Google yakazvifarira pandakamuudza marongero akaita saiti yangu uye kupi kwese kuwana zvese uchishandisa yangu Robots.txt uye Sitemap.xml mafaira.
Google inoda kuti ini ndinoisa nyowani zvemukati kumusoro zuva nezuva.
Google inoda kuti ini nditaure pamablog pese pese ndosiya zita rangu nekero yewebhusaiti.
Maitiro eGoogle Anondiratidza Ini Rudo
Handizive zvinoda Google zvakanyanya kana zvishoma - asi ndinoziva kuti anondida. Ndinoziva sei kuti Google inondida? Enda kumberi womubvunza iwe pachako!
Dzimwe nguva ndinonyepera Google, asi iye anondida zvakadaro.
Zvino, iwe unoziva kuti kana uchinyepera musikana wako, uye iwe uchifanira kuramba uchitaura nhema imwechete zvakare nekudzokorora? Asi iwe hauna waunoudza chero munhu nezve kunyepa ... inhema chete pakati pako naye. Ini ndaida kuratidza poindi yekuti dzimwe nguva vasikana vanozvifarira kana uchivanyepera. (Inogona kuzivikanwa se ngowani nhema).
Nguva refu yapfuura, pakanga paine yakakura yekuita nezve kupinda pa "a-rondedzero". Ini ndaida kuratidza, zviri pamutemo, kuti chero munhu anogona kuwana pane iyo-runyorwa. Iwe unofanirwa kutarisa zvakanyatso tarisa pamusoro weblog rangu kuti uone kuti ndaizomborongwa sei kumusoro “Runyorwa”. Heino chiratidzo:
kushambadzira, kusimudzira, wordpress uye tekinoroji blog ne douglas karr> span style = "kuratidza: hapana">, a-chinyorwa blogger> / span>.
Iwe waisakwanisa kuzviona… asi musikana wangu mutsva anozviona! Uye anondida. 😉
ZVIMWE ZVAKAITIKA: Ndabvisa mavara akavanzika kubva kumusoro wangu. Ini ndaingoda kuratidza poindi asi chokwadi haudi kubviswa kubva kuindekisi yeGoogle!
Tags: google webmastersGoogle +Robots.txtseoSITEMAPxml sitemap
Kutsvaga: Online Email Kutarisa Chishandiso
97 Nyika, 97 Inogamuchira, 97 Ndatenda!
May 3, 2007 pa 7: 47 PM
ROFLMAO - inotyisa asi inosetsa kupfuura gehena 🙂
May 4, 2007 pa 7: 31 AM
Ndatenda Steven! Ndakanakidzwa nazvo… iye… iye.
May 3, 2007 pa 11: 59 PM
Izvo zvakanaka kupenya. =]
May 4, 2007 pa 12: 07 AM
Ndinovimba unozvikudza pamusoro pako, Doug! Ndapedza awa rekupedzisira nehafu ndiri Google Webmasters.
May 4, 2007 pa 7: 30 AM
Hei ... usanyanya kutadza nemusikana wangu! Ini handidi kuti andibiridzire!
May 4, 2007 pa 2: 25 AM
Ndakafara kukuona uchiwana traffic yakawanda kubva kuGoogle. Ndanga ndiri munzvimbo yakafanana kubva pandakatanga kuita SEO matipi chinguva kudzoka. Icho chinongedzo kune pearsonified yakanaka. Ini ndakazadzisa rairo yake chinguva kudzoka uye inoshanda, nguva!
Ini ndinowana ingangoita 50% yetraffic yangu kubva kuGoogle 🙂
May 4, 2007 pa 7: 32 AM
Ndiri kushamiswa mazuva ese ini pandinoongorora zvinyorwa zvangu!
May 4, 2007 pa 6: 50 AM
Mudzimai wangu anonyepedzera kusvotwa nenguva yangu nekombuta yangu yaDell - "Della" ndiro zita remakwikwi - asi zvinoita sekunge Google inogona kunge iri yakanaka pipi pipi zvakare!
May 4, 2007 pa 7: 34 AM
Della anonzwika kunge akanakisa kudarika Googla. Ndiri kufungidzira Googla iri girazi rakazara - asi ndinomuda. 😉
May 4, 2007 pa 5: 13 PM
Haa, ndinoziva kuti unoda musikana wako uye zvese asi hazvivanze zvinyorwa zvinoputsa Google's webmaster mirayiridzo?
May 4, 2007 pa 7: 11 PM
Hongu… ndosaka ndakabvisa. 🙂
MN Webhu Dhizaini
May 5, 2007 pa 12: 23 AM
Zvakanaka! Ini ndinoda chokwadi chekuti "musikana" wako chigadzirwa chehunyanzvi! 🙂
May 5, 2007 pa 9: 45 AM
Zvichida zviyero zvangu zvakanyanyisa, MN! 😉
May 5, 2007 pa 7: 20 AM
Ndakaverenga chirevo chako pane pearsonified webhusaiti nezve iwe kugadzirisa ako masitayiti machira emamantic markup. Ndiri kuona mukana wakanaka wekushambadzira wekuti iwe uburitse WP theme inonamatira kune ese markup mitemo 😉
May 5, 2007 pa 8: 19 AM
Dean, uri chokwadi! Ini ndinofunga iwo musika mukuru… SEO Yakagadziridzwa WP madingindira. Ndinoshuva dai ndaiva nenguva pamaoko angu!
May 13, 2007 pa 5: 07 PM
Google inonzwika inotapira. Ane hanzvadzi here? Oops, ndakapotsa ndakanganwa kuti ini ndato roora!